Ngokufudumala kwembulunga yonke kuzovela izinhlobo ezintsha | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isigaxa saseYurophu (ngezansi) neselevu laseBalearic. Isithombe - M. Zampiglia
Ngokufudumala kwembulunga yonke indawo engokwemvelo yohlobo oluthile ingancishiswa ize ifike lapho iphoqeleka ukuba izalane nezinye uma ifuna ukugwema ukuqothulwa, njengoba kunjalo nangamasele ongawabona esithombeni. Elingezansi yicwecwe laseYurophu, elitholakala cishe kulo lonke izwekazi, kuyilapho elihamba phambili kuyisigaxa saseBalearic, esihlala kuphela eBalearic Islands, eCorsica naseningizimu ye-Italy.
Izilwane ezimbili ezihluke ngofuzo ziyazala futhi njengoba izinga lokushisa kweplanethi likhuphuka, ngokusho kocwaningo.
I-Hybridization yinto yokuthi, noma imvamisa kungokwemvelo, uma sibheka umthelela abantu abanawo emhlabeni sibona lokho ngandlela thile njengamanje yithina esiphoqa izilwane nezitshalo ukuthi zihlangane zodwa. Ukugawulwa kwamahlathi, ukuncibilika kwezigxobo, ukuqhubekela phambili kogwadule namadolobha, kanye nokungcola kanye nokwethulwa kwezinhlobo ezintsha zezilwane, yizona zinto eziyimbangela yalokhu kuhlanganiswa.
Ngenkathi izinhlobo "ezihlasela" zihlala endaweni ngaphandle kokukhathazeka ngezilwane ezidla ezinye, ezinye izinhlobo kubambezela umjikelezo wayo wokuzala uze uqondane nowokuqala. Futhi lokhu kuyinto okuthi uma kucatshangelwa isimo sezulu, kwenzeke kaningi eminyakeni ezayo, ngokusho kwabaphenyi boMnyango Wezemvelo e-University of Tucson.
Izinhlobo ezifana kakhulu kwesinye nesinye ngokuvamile zishintshanisa ingxenye yofuzo lwazo ngenxa ye-hybridization, okuholela ezinhlamvwini ezisebenzisekayo ngokwanele futhi ezivundile; ngokungafani, izinhlobo ezikude kakhulu ngokuvamile azipheli ngokushintshaniswa kofuzo. Leyo bangazalwa benokukhubazeka noma bangazalwa.
Kepha uma le nqubo ye-hybridization ivela ngokwemvelo, njengoba ibilokhu yenzeka kuze kube yilapho umuntu eqala ukuba nomthelela omkhulu kangaka kwezemvelo, kuthwala uchungechunge lwezinzuzo ezifana nokumelana kakhulu namakhaza noma isomiso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ama-nzalo amasha azovela ngokufudumala komhlaba
Ividiyo ephazamisayo ikhombisa ukuncibilika kweqhwa e-Alaska kusuka ngo-2007 kuya ku-2015